ကိုဗစ်ရှေ့တန်းမှာ နေ့မအား ညမနား တိုက်နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အားနာကြပါဦး - Zet Star
ကိုဗစ်ရှေ့တန်းမှာ နေ့မအား ညမနား တိုက်နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အားနာကြပါဦး
ဒီနေ့ ကျတော် မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ကနေ ကိစ္စ တစ်ခုပြီးလို့ ကုတင် ၃၀၀ ကိုအသွား လမ်းမှာ လန့်စရာကောင်းလောက်အောင် လူအုပ်ကြီး များ ဆိုင်ကယ် ၊ကား ၊သုံးဘီး အသီးသီး နဲ့ လမ်းမထက်မှာ လမ်းပိတ်လုမတက် လှည့်လည် သွားလာ နေကြတာကို တွေ့ လိုက်ရတော့ တော်တော်လေး စိတ်ညစ်သွားမိပါတယ်….
လူတွေမှ တကယ့် အများကြီး ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံနဲ့ အတူ ခုန်ပေါက်မြူးတူးနေကြတာ social distancing မပြောပါနဲ့ တချို့ တွေmask တောင် မတပ်ထားကြပါ…Stay home ကာလမှာ ဒီလိုတွေတောင် ဖြစ်နေကြပါပြီ
တကယ်တော့ တစ်ချို့တစ်ချို့သော ကိစ္စများဟာ တကူးတက ပြောပြစရာ ကြေညာစရာကိုမလိုလောက်အောင်ကို သေချာနေပြီးသားပါ ကျတော်တို့တွေ အားလုံးရင်ထဲမှာ ဘယ်ပါတီကို မဲပေးမလဲ ဆိုတာ သိသာထင်ရှားနေပြီးသားပါ…. ထူးပြီး မေးစရာကို မလိုတာပါ…. တကယ်ရင်ထဲကကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနဲ့ ပေးကြမယ့် မဲထည့်ကြမယ့် ပါတီဟာ ဘယ်ပါတီလဲ ပြောစရာကို မလိုလောက်အောင် သေချာပြီးသားပါ….
လာမယ့် မဲပေးရမယ့်ကာလမှာ အားလုံး ကျန်းမာစွာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ မဲပေးနိုင်ရလေအောင် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲအောင်ပွဲခံနိုင်အောင်လို့ အခု လိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း စည်းကမ်း လိုက်နာပြီး ပြုမူနေထိုင်ပေးကြဖို့ လိုပါတယ်
အခုဆို ရင် ကျတော်တို့ COVID Hospital အဖြစ်ရပ်တည်နေရတဲ့ ကုတင် ၃၀၀ သင်ကြားရေးဆေးရုံမှာ ပိုးတွေ့ လူနာ ၂၀၀ နီးပါးရှိလာပါပြီ နေ့တိုငိး ဝင်လာမစဲ တသဲသဲပါ…. ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရတဲ့ လူနာ များ ကို ပါထည့်တွက်ရရင် လူနာပေါင်း ၄၀၀ နီးပါးရှိနေခဲ့ပါပြီ
လူနာထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံး ၈၆ နှစ််မှသည် လပိုင်းအရွယ်ကလေးငယ် အထိ ပါပါတယ် နေ့တိုင်း/ ညတိုင်း အသစ်အသစ် တိုးလာတဲ့ လူနာတွေ အတွက် အဆင်ပြေရလေအောင် နေရာထိုင်ခင်းအတွက် ဘယ်နေရာ ဘယ်အခန်း ထားကြမယ် ကအစ လူနာအတွက် အကောင်းဆုံး ကုသမှုပေးဖို့ အထိနေ့စဉ် နေ့တိုင်း ညစဉ်ညတိုင်း ကျတော်တို့ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများ မှာ ညည့်နက်သည်အထိ တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ရင်း လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနေကြရပါတယ်….
ပိုးတွေ့လူနာ တစ်ယောက်လေး မှသည် မထင်ထားလောက်အောင်ကို တစ်မိသားစုလုံး အပါအဝင် နီးစပ်သူရပ်ကွက် မှ သူများအထိ ၁၀/၂၀ ယောက်လောက်အထိပိုးပျံ့ နှံ့သွားပြီးကူးစက်ခံရတာတွေကို ပြောမယုံ တကယ်ကြုံမှသိခဲ့ရပါတယ် သနားစရာ အိမ်မှာနေရင်း နဲ့ပဲပိုးတွေ့သူနဲ့ ထိစပ်မိလို့ ကူးစက်ခံရသူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကလေးသူငယ်များ ကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်…..
ကန်တော်နဒီမှာလည်း နေ့စဉ် ထပ်တိုးလူနာတွေနဲ့ အပြည့်နီးပါးဖြစ်နေပါပြီ နေ့တိုင်း လည်း တရက်ထက် တရက် ခန့်မှန်းလို့မရလောက်အောင်ကို ပိုးတွေ့လူနာ များများလာပါတယ်….COVID ပိုးဟာ ကျတော်တို့ လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ့မဆိုထားနှင့် အင်မတန် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ European countries တွေကိုပါ ပြိုလှဲလုနီးပါးဖြစ်သည်အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်တာကို အးလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မိသားစု ကိုပစ်ပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးထက် လူနာတွေ အတွက် နေ့ရောညပါ ဆေးရုံတွေမှာ နာရီ နဲ့မလပ် အချိန်ပြည့် မရှိရှိတဲ့ အင်အားနဲ့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပေးနေကြတဲ့ စောင့်ရှောက်မှုပေးနေကြတဲ့ ဆရာဝန် ဆရာမ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တွေ ကို မသနားဘူးလားခင်ဗျာ
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ဆေးရုံတွေ မှာ တာဝန်ကိုယ်စီထမ်းနေကြတဲ့ ကျတော်တို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ စိတ်ရော လူပါ အရမ်း ပင်ပန်းနေကြပါပြီ…. ဘယ်တော့ပြီးမယ်မှန်း ဘာဆက်ဖြစ်မယ်မှန်း မသိတဲ့ စစ်ပွဲ တစ်ခု အတွက် အားတင်းရင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ..
Risk ရှိမှန်း ကို သိသိကြီး နဲ့ first wave ကတည်းကနေ ယခုအထိ မနားတမ်း တောင့်ခံ ထားကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကို အားနာသောအားဖြင့် စာနာသောအားဖြင့် စည်းကမ်း လိုက်နာပေးကြပါခင်ဗျာ… ကျတော်တို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များ ကလည်း ရှိတဲ့ အင်အားနဲ့ မရရအောင် ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေဦး မှာဖြစ်သလို ပြည်သူလူထုကလည်း ကိုယ်စီကိုယ်စီ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး နေပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ…..
နေ့စဉ် ညတိုင်း ပိုးတွေ့လူနာ အဖြေ ကို ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ စောင့်မျှော်ရသော stressful COVID နေ့ရက်များ မြန်မြန်ကုန်ချင်လှ ပါပြီဗျာ…. အားလုံး ကိုယ်စီ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ပူးပေါင်းပေးကြပါက မဝေးတော့တဲ့ ကာလတစ်ခုမှာ ကျတော်တို့တွေ အတူတူ တပျော်တပါးကြီး အောင်ပွဲခံနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်…
← ဂျာမနီမှာနေရင်း ရေမြေ့ရှင်မင်း လုပ်နေတဲ့ ထိုင်းဘုရင်ကြီးကို မျက်စိစပါးမွှေးစူးနေတဲ့ ဂျာမန်အစိုးရ
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်မယ့် ရေငုပ်သင်္ဘော (ရုရှားနဲ့ အိန္ဒိယတို့ လက်ဖျားခါသွား စေရမယ်) →
တောင်ကိုရီးယား တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၈ ဦး ရှိသွားပြီ
လိုက်ဖ်လွှင့် စျေးရောင်းနေရင်း ပရိတ်သတ်ကို ငိုပြီး တောင်းပန်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
ထိုင်းဘုရင်ကြီး ပွေရှုပ်ခဲ့သမျှ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ထိုင်းပြည်သူတွေက နန်းချချင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း